Lesi sihloko sikhuluma nge umlando empilweni umlingisi Russian ethandwa, ke uzobe kuchazwe Biography Danila Kozlovsky. Namuhla, ubuso bakhe njalo kubaneka ezikrinini ithelevishini. Yini waqala umsebenzi umlingisi wakhe Danila Kozlovsky? Izithombe ambonise ukuthi insizwa charmingly ezikhangayo. Ingabe ukuphila eyamsiza?
Biography Danila Kozlovsky: ebuntwaneni umlingisi
Esesithathu ngoMeyi ngo-1985 umkhaya wesisebenzi ahlonishwe of isiko, izifundiswa kanye osolwazi MGUKI Valery Ivanovich Kozlovsky wazalelwa indodana yesithathu, owayebizwa ngokuthi Danilo. Kusukela esemncane umama umphuthumise studio umdanso, futhi kamuva esikoleni umculo, lapho lo mfana wafunda ukucula. Kodwa wayekhetha ukushayela ibhola, nge iminyaka eyisikhombisa waqala ukudlala ibhola e junior ithimba esikoleni esiphakeme. Lapho eneminyaka eyishumi, abafowabo abadala - Ivan futhi Yegor - abazali zanquma ukubathumela ngoba ukuqeqeshwa ubusosha Corps e Kronstadt. Daniel oyifunayo kakhulu ukuba, nimyeke ahambe nabo. Ngemva kwezinyanga ezimbalwa kubafowabo waxoshwa, kodwa junior ngempumelelo ukuqedela izifundo zami. Ngo-2002, wathola iziqu nge-honours.
Biography Danila Kozlovsky: esebenza ukuqeqeshwa
Ukujwayelana kaDaniyeli ifilimu kwenzeka ngo-1999, lapho wadlala indima lesithupha Seliverstova Denisa e ifilimu "Iqiniso Simple". Lapho izifundo zakhe e-ubusosha Corps kufike ukuphela, waqaphela ukuthi ezindabeni zezempi akanandaba ke nhlobo, ke ukudansela isiginci sakhe phezu isethi. Wabe banquma ukubhalisela inkundla yemidlalo yaseshashalazini akakuthandanga abazali bakhe. Naphezu kwakho konke lokhu, uDaniyeli 2002, waba umfundi Theatre Academy Petersburg, okuyinto waphothula ngempumelelo ngo-2007, unyaka.
Biography of umlingisi Danila Kozlovsky Filmography
Kakade ngonyaka wesibili Academy Kozlovsky waqala ngenkuthalo isinyathelo kumafilimu. Iqhaza main ifilimu "Garpastum" wathola, omunye angase athi, ngengozi futhi kungalindelekile. Uma kuziwa umqondisi ekolishi umsizi kwesokunxele nge izithombe nabalingisi okuqoshiwe videoproby, UDaniyeli akazange Ngethemba ukuthi uthole ingxenye, into ebaluleke kakhudlwana. Kepha wathola ucingo futhi wathenjiswa umsebenzi ngendlela elula, Uma unganakile, ifilimu ezemidlalo mayelana football. Eqinisweni, umlingisi uyaqiniseka ukuthi ezemidlalo kulesitfombe - kungcono into emelela izinkanuko wamavukelambuso zineminyaka kuleli zwe ekuqaleni kwekhulu XX. DEBUT yakhe yaseshashalazini kungenziwa ngokuthi ukusebenza in the play "Inkosi Lear", lapho kudlalwa Edgar, okuyinto waklonyeliswa "spotlight Igolide". izibukeli kwesikhathi Theatre of Europe, lapho ayesebenza khona, babona nezinye ukusebenza nge iqhaza lakhe.
Kowezi-2000, uDaniyeli isinyathelo kumabhayisikobho ezifana "Streets of Broken Izibani", "Spy" "iTestamente Lenin", "Merry", "uphawu", "Rasputin" kanye nabanye abaningi. Omunye imidwebo yesiteleka kakhulu nge iqhaza lakhe kukhona "" Duhless "futhi" Sesikhathele kusukela esikhathini esizayo. " Manje umlingisi uye izindondo eziningi embonini ifilimu, isimiso sakhe ngaso iminyaka eminingi ngaphambi.
Biography Danila Kozlovsky empilweni yakho
Phakathi nezifundo zakhe e-Theatre Daniel wahlangana nomkakhe esizayo - actress Polish Urshuloy Magdalenoy Malka. Ngo-2008, bashada, futhi kamuva eminyakeni emithathu hlukana. Ngubani ukuphila nalona umdlali Julia Snigir, phezu iqoqo le nkosikazi we ifilimu "Rasputin".
Biography kanye umsebenzi actress Joan Plaurayt
Indaba efingqiwe: "Dunno ku eSun City", Nikolay Nosov
Uyini stereogram nendlela ukubukela izithombe stereo?
Ukupheka pancake: lula futhi okumnandi
Kuthiwani uma i-iPhone yawela emanzini? amathiphu
Kuyini ukucwaswa? Izibonelo zobandlululo, ubulili, ukubandlululwa kwezenkolo